Posted by Lyndon deed	 69 Comments
Isticmaalka kratom baxaan opiat waa wax cusub - qarniyo badan, dadka ka cabanaya qabatinka opiat daran ayaa u soo jeestay in this daawaynta dhirta dabiiciga ah ee gargaarka. Weynaaday duurjoogta ah ee kaymaha ee koonfur bari Asia, kratom ayaa loo isticmaalaa sida daawooyinka ah ee kala duwan xaalado caafimaad oo khatar ah, waayo, in alla intii kun oo sano. Recently, cilmi ayaa xaqiijisay wixii la si fiican Caam ahaan u qoran - ka dhirta ee wada jir dabiiciga ah awood dejiyo kartaa calaamadaha ugu daran. Taas ayaa ka dhigaysa mid Kratom oo ka mid ah daaweynta ugu wanaagsan ee waxyeellooyin bixitaanka daroogada. Tani waa wararka laga yaabo cajiib ah malaayiin kii dunida qabatinka opiat ballaaran dagaal.
Sidee Kratom Works for opiat noqoshada
First, aynu dib u eegno sida opiates abuuro tiirsanaanta ah ee jirka. opiat The agonister bond la receptors cell iyo kicin habdhiska u dabacsanaadaan. Natiijooyinka kicinta Tani heerka sii kordhaya ee wax soo saarka endorphin, oo ma aha oo kaliya abuuraa dareen ah dareen "sare" ee user, waxa kale oo uu sharxayaa kor u firfircoon khatar ah. Muddo ka, jidhka habaysaa si ay heerarka cusub ee shaqo iyo dareen. Laakiin, jirka ma sii wadi kartaa heerkan wax soo saarka endorphin on gaar ah, sidaas receptors bilaabaan inay qaylo for more of daroogada. Haddii user ka istaago opiates quudinta si receptors ah, nidaamka oo dhan hadda dhammaaday dareemayaasha mara shil daran. Waayo-aragnimo shakhsi ahaan of this waa sidaa aad u daran in user a si dabiici ah Dooni inay ka qaataan opiates more mutto dareenka xun. Sidaa awgeed, balwadda ah dhashay.
Kratom ma aha opiat ah. The dabiici-dhaca wada jir taahi doonaa in ay sameeyaan gudahood caleenta geed Mitragyna Speciosa la falgala receptors opioid'ka jirka ee, laakiinse iyagu ma ay dhalin tiirsanaanta muddo dheer ama qabatinka. Kratom waxay leedahay saameyn nasteexo leh ku receptors "saboolka baahan", iyaga aysan via kicinta dabiiciga ah dib xaalad aad u miisaaman.
Qaar ka mid ah gargaarka in kratom siin karaa ka cabanaya bixitaanka:
Return of rabitaanka cuntada caadiga ah.
Relief ee muruq xanuun la xiriira ka bixitaanka.
Kartida aad u seexan.
Caawimada fikirrada murugada la xiriira.
History of Kratom Isticmaalka Waayo opiat qabatinka
Laga bilaabo 1897, daraasaadka ugu horaysay la daabacay kor u qaadida kratom baxaan opiat waxay bilaabeen inay u muuqdaan. Maanta, kratom waxa inta badan loo isticmaalaa in barnaamijyada avgiftning Metadon, ayaa lagu taliyay in ay wax qabad ka dhanka ah bixitaanka qabatinka daroogada isbitaalada sida Machadka Qaranka ee Thai dhaqanka Medicine ee Bangkok. dhibcood cilmi si wada jir ah ugu danbeeyay ee 7-hydroxymitragynine sida laga yaabee agonist ugu weyn ee masuulka ka ah dabacsan receptors baxayaan.
Kratom iyo methadone
dadka isticmaala badan ayaa sheegay guusha xoog isticmaalka kratom baxaan opiat sida ay si gaar ah u khusaysaa in Metadon. Long qoray sida kale ammaan ah, waayo, dadka qabatimay heroin, Metadon laftiisa on tegey si ay u noqdaan qabatinka ah nolosha oo dhan, waayo, ka cabanaya badan opiat ku tiirsan. Trading qabatinka kiimikada mid kale waa at fiican u dhaqaaqo lateral. Si kastaba ha ahaatee, by bandhigid kratom galay nidaamka ay, users Metadon ay awoodaan in ay sii daayo gacanta kiimikada qoto dheer oo ku saabsan hababka ay.
Kratom, ku simaha sida agonist a receptor mu muddada gaaban ee jirka, ogolaataa user in ay si deg deg ah wax badan gudbaan ah qaab nololeed free opiat badan isku dayay in uu gabogabaysmo isticmaalka via Metadon. Sida ayaa la arkay, qaar ka mid ah dadka isticmaala Metadon weligood ma samayn karo tapering this, sannado badan. Qoon gaystay opiat ama metadon isticmaala weli la kulmi doonaan calaamadaha baxaan sida ay sameeyaan guurka, laakiin waxyeelo marka la isticmaalayo kratom waxaa loo arkaa in ay aad uga fudud oo la maarayn ka badan waxa caadi ahaan loo arko ka Metadon. Sababtan awgeed, isticmaalaya kratom baxaan ka Metadon ayaa laga yaabaa inuu ka duwan oo cusub oo macne kuwa lagu qabto wareeg qabatinka kiimikada.
Sida loo isticmaalo in lagu daaweeyo Kratom Drug qabatinka
Furaha daaweeyo astaamaha u-barashada la kratom Waa kaa samirkii. dhibic oo dhan, si loo yareeyo jidhka off of tiirsanaanta ay. Qaar badan oo dadka isticmaala opiat muddo dheer dhib tapering off walax sida metadon maxaa yeelay, waxay ka nixin nidaamyada ay la joojin habeen lama filaan ah. Inta badan dadka isticmaala kratom kuwaas oo sheegay guulo la habkan ku talinaynaa in hab gaabis ah oo wuxuu qiyaasay, bandhigid caadi ah kratom meel of Metadon, si tartiib ah, muddo bil ah ama ka badan. ka dibna si tartiib, sida badan iyo metadon dheeraad ah ayaa lagu bedelay kratom, user ka dibna si tartiib ah hoos u dhigi kartaa qiyaasta iyo inta jeer ee ilaa iyo inta ay gabi ahaanba joojin kratom.
Qof walba waa ka duwan yahay, iyo dabcan adkaanta astaamaha u-barashada, dulqaadka, iyo xaaladaha kale ee dibadda ayaa la ciyaari doonta kaalin ee geedi socodka. Qof kasta oo ka cabanaya qabatinka opiat waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay caawinaad weydiisato xirfadeed iyo taageero ah ee facooda ah ee isku dayaya in ay soo noqdaan in ay miisaamaan. Isticmaalka Kratom for avgiftning opiat waxaa sida ugu wanaagsan sameeyo hanuun ka xirfadleyaasha caafimaadka. Kratom ciyaari karaan dowr qiime leh ee caafimaadka qaba, kabashada ammaan.
Waa kuwee kratom noqon lahaa ugu wanaagsan ii? murugada la kulma, hurdo la'aan, iyo dareenka guud negative. Waad ku mahadsan tahay caawimada.
Waxaan ku nool UK iyo iibsan aan Kratom baxaan ka Kratomsupply.net aan u baxaan Tramadol isticmaalo laakiin waxa ay la shaqeyn doono opiat kasta. Waayo, todobaad ka bixitaanka aan soo iibsan 50 garaam oo ay budada Malay cagaaran oo ay leeyihiin qaadada shaaha buuxda marka aan bilaabo dareem in xunxunna. Waxay ka dhigaysa bixitaanka cadaabta ka mid ah wax badan ka sahlan. Haddii aad u baahan tahay caawimaad kasta email ii soo dir, Steve.
Ka dib markii hysterectomy a 8 todobaad ka hor, Waxaan la siiyey 8 mg. of Dilaudid maalin kasta (laba – 4 mg. kiniiniyada – 1 in am iyo 1 in pm). My OB ogyahay in aan xanuun joogto ah aad u daran, oo haatan waxaan qaar ka mid ah waayey ilaa cudurka bakteeriyada laga yaabaa in ay qaataan bilood in laga takhaluso. Waxaan u tegey OB maanta. My OB waa fasax sidaa darteed waa inaan si aad u aragto takhtar kale. Waxay ahayd jawaan total! Waxaan joogi jiray isagoo qaylinaya maxaa yeelay, waan xanuun badan oo dhan ayay la odhan karaa wuxuu ahaa, “Anigu ma qori opiates!” Markaas ayaan kaliya ku saabsan waxaa laga badiyay! waxaan is-idhi, aan OB i siiya 8 mg. maalin kasta. Markaas ayaan weydiiyey haddii ay i siin kartaa wax yar ilaa aan OB si joogto ah dib ugu yimid. Waxay sheegtay in NO! Sidaas, ka hor inta uusan soo bixid bilaabi, Waxaan lahaa saaxiib aan soo qaado sibraar Sare kaabsoosha Malaysia ii. Ma waxaad u malaynaysaa in laga bilaabo si ay wax yar isla markiiba ka hor astaamaha u-barashada qaadan xitaa bilaabi noqon lahaa fikrad fiican? Like waxaan ku idhi, Waxa kaliya ee aan qaaday 8 mg. maalin kasta……..sida laguu! Weligay qaaday more, iyo mararka qaarkood waxaan kaliya qaadan lahaa 1 maalin. Waxaan sidoo kale soo qoray 7.5 mg. afar jeer ee Percocet maalin, kaas oo aan u qaadan sidii qoray. Ma kula tahay in ay ku Percocet la Kratom ka caawin doonaa astaamaha u-barashada? info kasta noqon lahaa weyn! Thanks! ????
Ma this shirkad fadhigeedu uu yahay UK waxaan qorsheynaya inuu ka farxiya si
Hi Steve sida aan u la xiriiri kartaa?
hi Steve! Waxaan ahay baxay kiniiniga iyo ma doonayaan in ay dhex maraan withdrawl. Waxaan ku saabsan Kratom akhriska iyo iibsaday kaabsoosha qaar ka mid ah. Anigu ma heli karo qiyaasta saxda ah. Waxaan rabaa in aan la hadlo qof iga caawin kara.
hi Steve. Thanks inuu i email. Anigu waxaan ahay 57 sano jir ah ka badbaaday kansarka in ku dhowaad laba jeer dhintay, laakiin ma uu samayn! Haah! Waxaan leeyahay dhakhtar xanuun wanaagsan iyo maalin qaadan Percocet laakiin waxa ay doonayaan in la helo wax si ay u bilaabaan taageero ah oxycodone ah. Waxaan ahay mid aad u jir ah BS wax doqonimo ah oo arkay aad blog raadinta Kratom. Waxaan doondoonayaa wax macneheedu qaada in dareen argagax ka dib markii maalin socday oo aan Percocet. Waan ogahay in ay qaadan doontaa waqti iyo dulqaad laakiin ayaan darsayay badan oo ku saabsan waxyaabaha kala duwan BADAN oo laga helay wax ku saabsan Kratom. Waxaan ku nool USA ee Colorado iyo jeclaan lahaa talo fadlan waxa aad u malaynayso Kratom sameeyo marka aad u qaado oo meel adag oo lagu kalsoonaan karo si ay u soo iibsadaan waa meesha. Waad ku mahadsan tahay wax badan muddo aad iyo samir. sugaynaa in halkan aad ka. Si daacad ah, Bart.
Waxaan la yaaban ahay sida aad u xiri kara ahee ee bixitaanka opiat in Tramadol, tan iyo Tramadol ma aha opiat ah?
magacyada aan HI Steve kev, i akhri aad post on kratomonline ku saabsan ka bixitaanka. aad ayaa sheegay in wixii caawimo email aad. aan tirada mobile waa 07471908151 aad i siin kartaa call iyo il call a in aad dib u Cidhiidhi sida iv helay dhawr su'aalood. wax ku oolka ah, farxiya, kev
Waxaan kula talin lahaa strand Malay kaa caawinaya in aad u seexato.
Hi Steve im quiting tramadol sida i samayn kartaa i baahan xoogaa gargaar ah nooca kratom waa kan ugu fiican ? Id u mahad haddii aad iga baxay ayaa kaa caawin kara
hi Steve, Waxaan ahay cajiib ah haddii ay taasi shaqayn lahaa dependance heroin a? Waxaan la yaabay, haddii qofku isticmaali kartaa kratom halka on heroin. My saaxiib ayaa isku dayaya si ay u helaan qiyaas yar ee heroin oo aan la kulma bixitaanka curyaamisay maxaa yeelay, wuxuu shaqo ka maqnaan karaa. Isagu waa dakhliga kaliya ee qoyskiisa. Ma doonayo in aan soo jeedin Kratom aan ogayn haddii ay jirto contraindication a?Waad ku mahadsan tahay talooyin ku. Kiki
cadaadis kasta oo ka iibiya a sumcad sameeyo waa in. Waxaan isticmaali cas, white, iyo noocyo xididka cagaaran iyo dhammaan si fiican u shaqeeyo. My jecel in kastoo waa xididka cad, maxaa yeelay waxa ay u muuqataa in ay dar laad ee tamarta kaas oo waa ku weyn yahay marka aad la xayiran on sariir ku gateen la soo bixid. Waxay sahlaysaa in badan oo calaamadaha yareynta geeddi-socodka (in aan waayo-aragnimo) in maalmo yar caajis, laakiin aad uga wanaagsan kale ee aan waxba haysan si aad u hesho iyada oo loo marayo. Waxaan hadda isticmaalay kratom badan marar badan inuu bedel u yahay xanuun joojiye sida aan xanuunsado tan iyo arrimaha spinal. Weligay ma aan dareemay xitaa xoogaa yar qabatimi in ay.
Steve Waxaan rajaynayaa in aad ka heli.
Waxaan ku jiraan this story longish ay dhacdo in dadka kale doonnida isla xidhiidhi karaa oo aad aad u caawin.
Waxaan on OxyContin muddo sannado yar ah, waayo, waxyeellada dareemayaasha daran. Ka dib halkan ka Australia yimaada xaaladeyda dartay (depression)iyo NHS GP fahamka u muuqda mid aad u of my xaladaas ii sheegay in uu ra'yi xanuunka waxaa ka xun qabatinka sidaa darteed waa in aan qaadan sida ugu badan Oxy sida aan u baahnaa. Ka dibna wuxuu ii soo qoray laba boqol jeer 80mg muddo lix todobaad ah waxaan noqon lahaa Europe. Well this dabcan wanaagsan shaqeeyay maadaama ay ahayd inta lagu guda jiro waqti gaar ah walaac iyo qaadashada tegey lix x 80mg maalin kasta. Well on rugta soo laabtay oo aan soo ogaaday in dhakhtar this tegey oo mid kale ma jiro qori lahaa lacagta ay addict cusub ka dhigay baahan yahay. Tan iyo markaas, ku saabsan siddeed iyo toban bilood ka dib waxa ay ahayd dagaalka shire ii isku dayaya in ay hoos u my qiyaas. Marka waxaan u helaysaa in aad lacagta aad uga hooseeya odhan laba x siddeetan maalin aan sort of taqalustay oo mar kale u baahan tahay saddex. Well mar kasta oo ay taasi dhacdo GPs bilaabi iila dhaqmayo sida aan ahay dambiile ah xitaa tho ay qabaan aan taariikhda buuxa sidaasi darteed waxaan go'aansaday in ay isku dayaan Kratom. Waxa aan rajeynaya aad uga jawaabi kari waayeen waa: Anigu ma ihi ay awoodaan in ay bedeli qaar ka mid ah si tartiib ah u sii socotay inay noqon turkey qabow sida laba maalmood ka dib, lakiin waxaa fiicnaan lahayd in la qaato mid ka mid ah 80mg ku oxy maalin iyo Kratom markii aan heli lahaayeen qiyaasta labaad iyo saddexaad? Ma ii sheegi kartaa hanuunin ku saabsan sida loo si wadi inaan ugu bax of this? Ma jiraan wax supplements kuwaas oo caawin doona la niyadda ama jamasho ama waa Kratom fiican u gaar ah?
Haddii adiga ama qof kale knowledgable saabsan mowduuca jawaabi karo fadlan Aasaa :-)
Thanks oo Ilaah ammaan
Ed- isku day in aad qaadato mid ka mid oxy maalintii muddo wiig ah oo ay haa tahay bedelo inta kale ee qiyaasood oo aad la kratom. Ka dib markii todobaadkii la soo, kaliya qaadan kratom ah. Waxaan arkay aniga qaadashada kratom 3-4 jeer maalintii inta lagu guda jiro waqti ugu xumaa ee ka bixitaanka. Waa in aad bilowdo ka badan naftaada sida dareen toddobaad ka dib markii. i aamini, Waan ogahay waxa aad dhex socday oo aan kaliya doonayaa inaan ku odhan, aad tahay qeybiso noqon okay. Kratom ah, in la yidhaahdo yaraan, badbaadiye. Waxa aan addicting sidaa daraadeed waxa qaadan sida aad dareensan tahay in aad u baahan tahay inaad. qiyaasood oo waaweyn yihiin ka badan ku dejinaysaa, qaadasho yar oo aad kor u Pep doonaa. nasiib wacan iyo waxaan rajeynayaa in sida weyn u shaqeeya wuu idinku soo bixi waayo, sida uu leeyahay ii!
Waxaan Bilgium kuw bilaabay krat maanta withdrawls off H. Eeg sida ay u socoto. Ill sii yall updated. i rajeynayaa nasiib wacan
Sidee ayaa Waxaa socday In fikirayo isla wadada
wax fellas news? xiiso iyo sidoo
Waxaan la xidhiidhi karaa waxa Ed ayaa sheegay in aad u badan oo waxaan ahay mid u baahan caawinaad / Hanuun.
I leedahay xaalad dhafoor-xanuun daran oo chronic, ayaa si xad-dhaaf ah Takhaatiirta dareemeyaashu, ku kasta “xanuunka dhanjafka” daawo halkaas, ayaa badan daaweynta botox dhawaan la ansixiyay ee Kanada halkaas oo 31 irbadaha la sameeyey oo dhan madaxa, qoorta iyo garbaha (kasta 3 bilood $800 dura aan daboolay) laakiin waxba ka caawiyay. Waxaan la saaray Emtec-30 (30mg codeine / 350mg acetaminophen) by takhasus u leh in la qaado 3-4 jeer maalin kasta oo lagula talinayaa in ay qaataan 4-6 kaniiniyada qaadasho kasta. Tani waxa ay ahayd markii aan ahaa wiil dhalinyaro ah oo hadda 15 sano ka dib, Waxaan ahay on qiyaas isku mid ah, weligay ma u xadgudbo, waxaa loo wareejiyay codeine si toos ah 30mg phosphate (si looga fogaado in sumoobo beerka) laakiin waxaan ka go'ay turkey qabow. Ka dib markii uu u dhaqaaqo Gobolka cusub meesha aan ahaa mid aad u ogayn waxay leeyihiin cusub “howleed” si ay u caawiyaan dadka qabatimay waddada laakiin waxa ay qirtay in dadka sida naftayda ku dhici doonaan meesha ka baxo. Anigu ma heli karo dhakhtar kasta inuu i on qaadan bukaan ahaan ka dib markii aad u raadinaya ah 4 bilood Waxaan halkan joogay. Sidaas daraaddeed waxaan la safraya 250km gacan a rugta kasta oo socod ku socday. Inta badan ii diidin, qaar ka mid ah bixin doonaan todobaadkii ama 2 qiimaheedu “hal mar oo kaliya gargaar”.
Waxaan in aan rugta la soo dhaafay iyada oo duulaya meelo kale oo aan macno ma aan samayn karo. Waxaan ahay mid aad u war Waxaan ahay on qiyaasta a in loo baahan lahaa tapering haddii xataa aan loo moodayay inuu yimaado off daawada (this xaqiijin doonaa oo kaliya laguna sariirta fuuli jaf regarless). Laakiin waxaan ahaa on iyo off bixitaanka halkan dhawr maalmood, toddobaadkii waxaa tan iyo markii aan halkaan.
Sidaas waxa hadda waan ku samayn karaa? Waxaan halkaan inaan ku fadhiya cilmi baarista waxa fursadaha ii tahay ka sokow dhimashada (ka xumahay, aan isku dayaya in ay riwaayado at dhan…Waxaan ahay arrin adag, laakiin waan ogahay waxa aan ahay, waayo, halkan). Waxaan si fudud u leeyihiin NO fursadaha saadaalin karo si aad u hesho nooc kasta oo midab on my qoro (iyo haa waxaan ku socon xafiiska dhakhtar kasta ee la dhalooyin pill, sano ee rasiidhada iyo file caafimaad oo ay la socdaan warqad faahfaahsan oo aan ka dhakhtar ka hor kuwaas oo waxaan arkay sanado badan) laakiin aniga ayaa wali u sheegay no, ay u leeyihiin in ay ka taxadartaa waxa iyo cidda ay qoraan in.
Kratom at dhan i caawin kartaa tan iyo markii aan kaliya tegaya turkey qabow ka sare oo ah qiyaas ama layga aan dabeeto?
P.S. Sorry for post dheer iyo aad ugu mahad naqayaa, waayo reading.
Alyssa — Kratom caawin karaan bixitaanka. My gabar waa xanuun bukaan chronic iyo qaadataa 30 morphine mg, kaas oo aad u xoog badan socday galay bixitaanka ba'an noqon karaan halis. Haddii ay taasi dhacdo, hesho isbitaalka.
Waxay isticmaali kratom iyada iyo dulqaadka waa cadaalad ah sare xitaa markii ay soo yaraanayeen ka opiates qoro. Waxa ay u gargaarto soo bixid iyada (laakiin aan wax badan iyada qoorta-madax xanuun.) The dose kratom celcelis ahaan la sheegay in ku saabsan 5 si ay u 7 garaam (maalin kasta.) Waxay qaadataa 16 g. inta lagu jiro maalinta (ka dibna mararka qaarkood iyada morphine habeenkii.) Waxay tani si soojeedaan inta ay saacadood maalintii sida morphine iyada sedates aad u badan.
kratom ugu horeysay oo ay qabsadeen yeellay iyada buka iyo Fight, si taxaddar. Sidoo kale taxaddar in juice liinta potentiate kartaa saamaynta. Waxaad ma dhiman doono ka kratom laakiin waa in ay qaataan in yar ka qaataan si ay u arkaan meesha dulqaad waa. Waayo, in badan oo ah budada kratom, isticmaalaya kaabsoosha gelatin laga yaabaa in si fiican u shaqeeyaan badan is dhexgalka shaaha, juice, ama yogurt. Sidoo kale ugu fiican qiyaas spectrum buuxa shaqeeya oo iska ilaali kartaa waxyeelo., Sidaasi darteed waxaan isku daraan ilaa xididka guduudan badh xididka cad iyo badh (guud ahaan loo yaqaan kratom Bali.) Waxaan ka fogaadaan lahaa yeela sida ay si deg deg ah loo kordhiyo kartaa dulqaad: qaanuunkan waa, wax ka badan aad u baahan tahay, oo uu gabogabaysmo qaado (kratom ah) halkaas ka.
Waxaa jira oo kale oo ka weyn qalabka counter ee WDs ah si aad u hubiso soo baxay iyo sidoo, sida dextromethorphan Caraabaah iyo Imodium (lopermide.) Eeg
Anonymous, Waxaan ahay wareersan saabsan Talo in Alyssa kor ku xusan. Waxaad sheegay in Imodium iyo dextromethorphan u fiican yihiin soo bixid. Ma qaarkood aad macnaheedu ma inaad tidhaahdaan diphenhydramine? Si kastaba ha ahaatee labada talooyin waa khalad. Dextromethorphan waa suppressant qufac. Iyadoo diphenhydramine caawiyaa inta badan ee aan ka noqoshada hurdo dadweynaha Dhagax, waxa keliya oo yhay astaamaha u-barashada: lugaha baaxaa ka samaysan yihiin mid aad u xun, iyo waxa ay leedahay saamayn kobcinaya in addict ka noqoshada samaynta hurdo aan macquul aheyn.
Dhab ahaantii dextromethorphan waa enantiomer ku dextrorotatory of levomethorphan, taas oo ether methyl of levorphanol ah, labada analgesics opioid'ka. Waxay kaa caawin doona calaamadaha opiat istareexsan oo immodium Loperamide waa opioid'ka ah oo uusan u dhaqmaan on habdhiska ma sababtoo ah waxa ay si deg deg ah waxaa laga dhoofiyey maskaxda by p glycoprotein. Loperamide waa intan ka waxtar badan u sii laakiin waa mid aad Calool
P.S. yay waayo, in kastoo Imodium
Wixii cid kasta oo u baahan yahay caawimo iyo ama Lil info on Dhadkan loo baahan yahay in ay kaa caawiyaan geedi socodka la isticmaalayo kratom baxaan opiat, Xeres link a oo Faahfaahinta wax kasta u baahan tahay inaad ogaato ka nooca kratom waa fiican, inta guud ahaan loo baahan yahay , sida ay u dheer tahay in loo isticmaalo, sida aad naftaada u diyaar garoobaan hore; noocyada kale ee dawooyinka kuwaas oo caawin doona in laga nafiso iyo yareeyo calaamadaha cudurka w.d halka on kratom sidoo kale ka. rajaynayaa in this ka caawisaa. =) Goodluck n ugu fiican ee farxadda…
Hello iyo mahad badan oo aad isku dayaya in ay na u baahan in WD ka xanuun med ayaa kaa caawin. dhibaatada, ma jiro “linq” siiyo in bayaankaaga. Waxaan aad u badan jeclaan lahaa in aan ka heli info oo dhan aan awoodo. Waxaa isagoo Year New iyo dhammaan in:), rajeyneysa inay maqlaan waxaad ka, ugu wanaagsan oo dhan ee 2016 Sanad cusub.
Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado pleaasseee sida badan si sax ah u baahan nahay inaan si aad u hesho iska h. Waxa aan bilaabay in la da maeng oo kale laakiin hubin haddii aan si sax ah u qaadato. Fadlan ii soo diri qaar ka mid ah info ama hab si arrintan loo sameeyo si sax ah. Waad ku mahadsan tahay iyo Ilaah ammaan!
Waxaan jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taas oo ka mid ah in la isticmaalo, waayo, hurdo iyo meesha aan ka dalban kartaa it.Thanks
Ma laga yaabaa in aad fadlan u sheeg qiyaasta ah withdrawl hydrocodone qof qaadashada ah 80 celceliska mg oo benzo a
Waxaan ahay cajiib ah oo arrintan ku saabsan sida aan ahay oo kaliya ogaado oo ku saabsan this markii ugu horeysay.
Waxaan ku 16 mg ah Suboxone waayo, 4 sano & Waxaan doonayaa in aan off waxaa ka mid ah in aan ku xuso dhamaan daawooyinka kale qoro dhakhtarkaasi on i. Waxaan si joogto ah loo siiyo kiniinka for more of dhibaatooyinka soo raaca sababa kaniiniyada … Uppers, downers & sidaas on. Waxaan dareemayaa sida aan doonayaa inaan furo maankayga & Waxaan u maleynayaa in mas'uuliyadda maskaxda si ay u caawiyaan i sii dhacdhacaan igu saabsan halkii ay ka sii shareeraysaa dhibaatada. Anyway waxa aad soo jeedin kartaa ii? Waan ogahay kaliya waxaan idin siiyey version kooban ee xaaladda dheer ku lug laakiin waxaan u baahan tahay caawimaad degdeg ah halkan. Thanks!
Hello oo dhan! Anigu waxaan ahay todobaadkii 3 galay isagoo off ah 6 sano qabatinka ipium! Oo kratum badbaadiyey noloshayda! Aan ku isku dayay turkey qabow iyo ka dib markii aan hurdada, cunidda, ama la cabbo, waayo, 4 maalmood dabadeed ayaan ahaa on suuqa ugu WAX! My buro i helay qaar ka mid ah Kratum iyo ku dhawaad ​​maalinta ku xigta waxaan dareemay caadiga ah. Waxaan soo qaadan 5G in am iyo PM. Tan iyo markii aan ahay on a 2 toddobaad kratum waxaan haatan u celin doonaa in 2.5g in am iyo pm! Mid ka mid ah xabbad talo, haddii aad ka dose of kratum heli sare, waa inuu wax badan. Waxaad u badan tahay oo kaliya beddelan doonaa opiates for kratum.
hi Jason, aad blog igu rajo gelisay badan iyo dhiirigelin. FADLAN xor ah haddii aad ku fikiraysid KASTA kuwa i caawinaya lahaa sida waxa brand ee Kratom….halkaas oo waa inaan uga iibsato…..qiyaasta iyo walax kale oo la mid ah supplements iyo cunto ama waxyaabo kale oo iga caawin lahaa xanuun aan ka soo iibsan kartaa iyada oo aan mar kasta i arkaya dhakhtarka. Isagu waa nin weyn, laakiin waxaan doonayaa in aan wax dheeraad ah oo aan Pharma weyn samayn. Thanks iyo Ilaahay ha barakeeyo.
Si daacad ah, Bart.
kaliya yaaban sida ay wax u leh isticmaalka kratom bixiddaada?
Waxaan la kor reading macluumaadka ee Kratom si aad u aragto haddii aan iibsan karo saaxiibkay. Waxa uu la dhibtoonayay qabatinka Vicodin iyo Percocet in qaadin qoro ka dib markii qaliin ah. Nasiib darro, uu noqday qabatimi iyagoo aan ogeyn ilaa ay goori goor tahay. Waxa uu ka soo kabsaday addict ka Heroin oo lahaa 4 sano oo nadiif ah ka hor inta aan qalliinka. Waxaan ahay mid aad uga welwelsan yahay inuu qaato maalin kiniinka oo aad rabto in aad ogaato haddii Kratom noqon lahaa mid waxtar leh in detoxing “turkey qabow”. Waxa uu leeyahay in maalin kasta shaqeeyaan oo aanan rabin inuu daalan ama waayey ilaa halka shaqada iyo halista naftiisa ama qof kale ku dhaawacmeen. Anigu waxaan ahay on methadone (58 mgs) oo doonaya in ay sidoo kale ku ogaan karaa haddii ii caawin doonaa in detoxing ka iyo sidoo kale. Fadlan ka jawaab oo ii soo sheeg, dhaqso badan! Mahadsanid!
Alyssa waxaan isku dayay loramide for baxaan taasoo ah basicaly in amodium. Waxaad u leeyihiin in ay ku dhowaad qaado 60 mg si aad u hesho relieff kasta. Waxaan uma waxaa recomend. Waxaa la dooxi brojektikani my in aan ku xuso calool ah. Waxaan beem qaadashada oxycodone xanuunka dhabarka cronic waayo, 5 sano. 20mg waqti oo aan si deg deg ah ku aflagaadeeyay bilaabay. Good marka hore, laakiin wax si aan waxba galabsan jeestay quruxsan xun. ilaa waxaan ka helay in 15 toban mg maalintii Isticmaalka aan script aroor hore. Laakiin taasi waa wax aanan eed ma dhakhaatiirta aan oo waxaan ag taagan. Waxaan is dhigay addict aan ahay maanta. Waxaan bilaabay qaadashada saftay kratom da maeng iyo waxay ka caawisaa. Ma ahan wax fudud ee la joogtid ugu horeysay. Ilaah ha barakeeyo
Loperamide, immod, waa daawo loo isticmaalo gargaarka shubanka. Waa daroogada aad u ammaan ah maxaa yeelay waxa ay si gaar ah uu ku koobnayn gudahood marinka GI ka, waxaa jira NO nuugista systemic. Iyadoo daroogada caawin doono arrimaha shubanka, waxaa gabi ahaanba ma yeelan doonaan wax kasta oo saameyn ku yeelan ama dhexdhexaadin ka bixitaanka.
Imodium uusan caawiyo withdrawl taageerada at qiyaasood oo aad u sarreeya. Sababta oo ah marka aad ku qaadan at qiyaasood oo sare u gudbo receptors ee maskaxda. Oo markii aan odhan qaadasho sare aan la hadlayo ku saabsan 70 si ay u 80 mg. Ma aha in aan ku talinaynaa lahaa. caloosha oo wuxuu keena in aan ku xuso tiirsanaanta aad kaliya Ganacsi. Sidoo kale waxaan hubaa ma kuu wanaagsan ahay at dhan.
Taasi waa been cad. Waxa aanu dhexdhexaadiyaan bixitaanka qaabab badan oo si fiican
Jhudyann, Fadlan google Loperamide baxaan opiat fadlan ka hor inta aadan ka jawaabi wax aad waxba ku saabsan ogaadaan . users opiat lagu qaadan dose Loperamide sare (immod) 30mg ama ka badan si loo yareeyo astaamaha u-barashada sannado. Waxaan sucessfully waxaa loo isticmaalaa dhowr jeer at 50mg / maalintiiba.
Anigu waxaan ahay Doctor ah Farmashiyaha & Specialist dabiiciga ah ayaa ka caawiyay bukaan hage in yaraynta calaamadaha bixitaanka opioid'ka & tiirsanaanta isticmaalka dawadan dabiiciga ah & dhalatada. Aniguba waxgarasho baan u gaar ah ee ma aha oo kaliya sida Kratom shaqeeya heer mechanistic, laakiin sidoo kale sida daawooyinka pharmacologic kala duwan u dhaqmaan sidoo kale. Fadlan ka fiirso ila soo xiriirto via my website at Integrativewellnessrx.com haddii aad jeclaan lahaa aragti ama caawin.
aad ee raba caafimaadka oo dhan & farxad,
Waxaan la qabatimay oxy ka dibna suboxone. Waxaan kratom loo isticmaalaa in lagu yareeyo soo bixid iyo waxa shaqeeyay sida riyo. supplements kale wanaagsan in la isticmaalo waa saliidda kalluunka for shaqada maskaxda, calcium, opiates u baabi'in, magnesium, ka shaqeeya iyo sidoo kale la calcium iyo kaa caawinaysaa in aad u seexato iyo muruqyada shimbirka baqdo, Valerian xidid. Waxaan laaday pharmies aad awooddo!!!
HI….IM qamaar in aad joojiso qaadashada METHODONE, IYO IM ON 100 Milligram A DAY. OO KRATOM fiican ME? Waxaan HA OGTAHAY. Waxaan rajaynayaa baan u samayn karaa.
Waxaan halkaas ka bilowday. Marka hal dhibic aan joogay 120 maalin ka waxyeellada dareemayaasha daran shil dhabarta. Fentanyl (sp?) MS Contin, iwm. Laga bilaabo 1990 marka waxay ahayd fikirka ah in ka badan ahaa ugu fiican si ay u joojiyaan wixii la odhan jiray Waddooyinkiisa xanuun.
Hadda waxaan joogaa 5mg 2x maalin aan innaba wax kale, laakiin si tartiib ah dib jarida.
Waxa aan bartay waa in marka on sida dose sare tagtey hal kaniini maalintii waa sahlan. Fudud si walba. Taas waxaan u yimid in ay aaminsan yihiin run buu ahaa ay sabab u tahay xaqiiqada ah in ay hoos u pill badh at the 100 heerka mg waa uun a 5% daadiyaa. Waa marka aad u hesho in ay yar tahay in uu helo adag. kaniiniyada Kuwani waa sidaas oo yar iyo sababtoo ah sida kaliya ee si aad u hesho caawimo “xirfad” ka dhigan tahay GP celceliska ma caawin kara bukaanka la avgiftning by sharciyo badan oo gobolka by dejinaya methadone. Ha, Metadon waxaa inta badan loo isticmaalaa dareemayaasha xanuunka ku furid ama xitaa ka sii badan dependance ama qabatinka ah ee caafimaad Aan jilitaanka dhakhso.
Metadon waa molasses ee xanuunka. Sidaas daraaddeed waxay qaadataa waqti dheer in la hoos shaqeeyo. Months, in aan kiiska igu qaadatay 6 sano. Haddana waan ka dhaqaaqin in ay isku dayaan kratom maadaama ay tahay mid aad u adag tahay in saadaalin jebiso 10 kaniiniyada mg lay siiyey wax ka yar. Anigu waxba ma aan qaadan ku dhawaad ​​sida jiran sidii markii aan isku dayay in ay joojiyaan “turkey qabow” marka on 8 si ay u 12 10kaniiniyada mg maalintii, laakiin haddana waa mid aad u carqaladayn.
Waxaan dhihi karaa marna waxaan jeclaa qaadashada kaniiniga iyo inta badan “illoobin” si aad u qaadato heerka dayactir badan ka yar heerka xanuunka yareeya a a. Waxaa mar walba dareemayay in yar sida xabbad dhimashada markii aan ama wax opiates kale qaaday.
Mid ka mid ah qalab Wareersan dheeraad ah in aan ka qaban marka gabbanayso waa tufaax ama sandisc mp3 ciyaaryahan yar yar iyo dhagaysan buugaagta codka ah loo isticmaalo. Waxaa jira dad badan oo lacag la'aan ah oo ku saabsan librivox.org iyo qaar ka mid ah at guggenheim.org ama ay ahayd .com…
si walba, Uma maleynayo qof dhihi karaa waayo hubin waxa ay noqon doontaa sida ugu fiican ee aad for. Waxaan doortay ugu tayada sareeya ayaan ka heli karaa sidii aan ma akhriyo in ka badan oo tayo hoose aad qaadato sare ka dhisan saamayn xun waxaa laga yaabaa in.
Oo haatan anigu waan ogahay in aan laga yaabaa in ay doorasho ka wanaagsan yahay oo kaliya mayran biyo kulul iyo pharms kale. Waxaa jira meelo dhowr ah si aad u hesho nooc oo kala duwan oo aad ka iibsan kartaa baakad saamiga si aad u hesho fikrad fiican ee idiin samayn doono.
Nasiib wacan, xoog yeelo sida aad la doonayo in la dagaalamaya xoriyad iyo tayada nolosha aad. Waan ogahay waa u qalantaa.
hello. Waxaan la gabi ahaanba la yaabi by saamaynta this dhirta la yaab leh oo isu. Waxaan la ku xiran heroin, intraveinously, waayo, in yar ka badan hal sano ah. Waxaan ugu danbeyn soo gabagabeysay wareegga in December. Uma maleynayo sidaas daraaddeed waan ku lahaa sida ugu dhow ee aan ahay maanta haddii Jirin kratom. Lagu caadaysatay in heroin waa isku mid…lagu caadaysatay in ay intravenously waa dalabkaas ah gebi ahaan kala duwan.
Sidaas, dabiici ah, Aad ayaan ugu maagaayo on isticmaalaya warshad this for soo bixid aan laakiin waxaan ayaa lagu soo baxeen of fursadaha iyo nolosha. Waxaan lahaa kratom loo isticmaalo ka hor guul yar on my soo bixid (this, Waxaan helay, waxay ahayd da'deeda sababtoo ah tayada kratom lay iibsiga. Waxay ahayd kratom headshop aad u liita. Anigaaba waxaan sameeyey iibsashada kale oo ka soo iibiya a kala duwan. Waxaa soo gaaray oo waxaan ku shubay 12 garaam galay galaas oo caano ah iyo waxa hoos chugged. Si aan la yaab leh, oo intaasu waxay ahayd wax yar oo aad u badan. Gudahood ugu horeysay ee 5 seconds ka dib markii baabbi'iya, Waxaan dareemay soo bixid aan ku dhowaad agtiinna ah oo si fiican la yimid dareen ah ayaa i kor, mid ka mid ah in la maqan yahay iyo sidoo kale in ka badan hal sano ah nolosheyda. Waxaan ka shalaayay qaadashada 12 garaam maxaa yeelay dheeraad ah oo ku bilowday in ka badan Fight waxaan ka helay. Laakiin waxay ahayd waano. Warshad Tani / guul leh looga hortagi karaa doonaan bixid xitaa ka intensities of qabatinka in dhaxayn in IV qabatinka heroin. nasiib wacan in qof ku jira xaalad this. Waxaad jeclaa iyo qurux :)
Anthony nooca kratom ma waxaad isticmaali? Waxaan sidoo kale ahay oo isku dayaya heli nadiif ah ka heroin IV iyo ma yaqaanaan sida badan ama nooca kratom in iibka. Waxaa smokeshop ah wadada aan ka gurigayga ku qor waxa u sii socotay inay u tagaan halkaas oo aad iska baarto. Fadlan dhaqso badan ku caawiyaan.
Isku day inaad hesho nooc cagaaran Thailand (mararka qaarkood loo yaqaan da maeng), qaado 7-8 garaam everytime aad dareento shitty..if aad gacmahaaga ka heli kartaa in lyrica ama neurontin mahadsanid doonaa ilaaha aad sameeyey!! (200 – 400mg ah si lyrica 2000 – 3000mg neurontin kasta 6 si ay u 8 saacadood) oo ay la socdaan in, isticmaalaya clonidine habeenkii waa ku weyn yahay, waayo, walwalka, hurdo, iyo sweats..I ka ahay waxan oo dhan idiin sheego ka waayo-aragnimo shakhsi, Waxaan ahaa on / off for heroin 5 sano iyo qaar ka mid ah isbedel…tani waa sida kaliya ee ii laado…Waan necbahay waayay, in ay si fiican u shaqeeyaan dadka qaar ka mid ah, ma me..take daryeelka iyo nasiib wacan
Waxaan la isticmaalayo Ron muddo ku dhow 2 sano , Waxaan dooneynaa in la joojiyo laakiinse anigu uma aan awoodin in ay ogolaanin qofna inuu ogaado inaan ahay addict ah. Waxaan isku dayay in uu joojiyo on aniga ii gaar ah oo aan marnaba si buka xanuunka iyo sida cabsi sida bixitaanka Ron ee i dareensiisay. Baahnayn in la sheego u baqeen ee maraya bixitaanka weli waxaan ahay haddii aan sii wado heerka Waxaan ku socdaa ma aha oo kaliya aan ku dhamaan doono ilaa furaysaan wax walba oo aan leeyihiin, laakiin waxaan ku dhamaan doonaa ilaa aan naftiisa u furaysaan. in Jinni waxay wici daroogada. Baryayaaye, ii sheeg waxa dhaawac ugu fiican si aad u hesho iyo qiyaasta ah in lagu bilaabo fadlan iyo
hi, Haddii aad fadlan ha laga yaabaa i garan waxa kratom shaqeeyay fiican aad u? Anigu waxaan ahay doonnida la mid ah sida aad ahaayeen iyo inaan anigu waxaan isku dayaya in jidadkayga la beddelo. Sidoo kale haddii aad wax kama qaba inuu i ogaado meesha meesha ugu fiican ee waa in la iibsado kratom oo tayo fiican leh. Waad ku mahadsan tahay si raxmad leh
Waxaan xanuun raagay daran sannado, oo waxa kaliya ee u ogolaanaya ii shaqeeyaan waa morpheme sulfate. My dose caadiga ah waa TID 90mg (3x / maalintii). Waxay ahayd ku dhowaad in muddo loooong. Si looga hortago laga badiyay oo dhan ee ay oggolyahay waxaan kala duwan qiyaasta u dhigma heerka xanuunka.
Maanta waxaan ku orday gaaban, oo keliya qaaday 120g maalintii oo dhan. Waxaan xusuustaa in aan ka iibsaday ka Krarom King 20 saftay of Gold Reserve, sidaa darteed waxaan go'aansaday in ay arkaan waxa dhici lahaa. hadda waxaan u qaatay in yar ka badan saacad ka hor, ugu horeysay 6 saftay, ka dibna kale 6 saftay saabsan 40 minutes ago. Ilaa hadda, dareemaan astaamaha u-barashada yar, run ahaantii ku dhowaad fududaan, oo waxaa jira saamayn xanuunka ku filan in aanan mar dambe ahay ruxid iyo oohin. Bravo Kratom !!! Oo waxaa barakaysan weyn Waxaad ku mahadsan tahay in dadka waawayn ee Kratom King, Jidka si ay u tagaan! Ay sumcad igu soo hoggaamiyey iyaga, inkastoo ay mararka qaar waxaa dhaleeceeyay hayo sida alaabada kooban, waxay leeyihiin halleeyaa. Waxay waa lagu soo dhaweynayaa u maamuli lahayd heerarka alaabada iyo doorashooyinka ee noocyada ay obterested iyo xitaa waxaan ka fiirsan doonaa in ay si caqli ah doorashada, iyo weydaan inventory ku wareegsan oo soo dhamaado ka weyn yahay waxa uu noqon waa in. Waxaan kaliya hadda more qaar ka mid ah amar ku, dhawr nooc, labada poain powdesr iyo soosaaray budo. Qorsheyneysa inay qas iyo tijaabino gaynta kala duwan. Waxaan isna kibrinaysaan doonaa in ay beddelaan in ka badan in xal organic in xanuun this infernal, laakiin walaac daran yahay haddii aan maareyn karo waxa aan ka yaabaynin in ay qaadashada sare ee kratom, haddii ay in ay oggolaadaan in qiyaasta morphene ah in ay hoos u. 270mg sida caadiga ah iyo ilaa 500 + mg maalintii ku caafimaad qabaa ugu xumaa malaha garaacayaa lahaa maroodi on qasacadaha ay, si aynu aragno sida this tagaa!!
Waxaan gebi ahaanba winging this, iyo Waxaan rajeynayaa waxaa jira qaar ka mid ah dadka waawayn in Yaqaannaan ku saabsan guusha leh ee ka morphene qiyaasta sare si ay kratom in kaliya uu noqon doono mid laga cabsado!! Thanks iyo waxaan soo bandhigi doonnaa sida wax u socdaan jidka.
forum blog Tani waxa ay i siisay rajada. Anigu waxaan ahay badbaaday kansarka in ku dhowaad laba jeer ku dhintay a. Waxaan u lahaa qalliin weyn oo ii adag qaatay laakiin waxaan ku noolaa oo waxaan ahay nool. Waxaan doonayaa in aan si xun in ay dib tayada noloshayda. Waxaan qaadan lacagta cadaalad ah Percocet maalin kasta laakiin waan jeclaan lahaa inaan si tartiib tartiib ah iyo samir ah waxaa ka mid ah ween. Waxaan jecelahay talo ALL iyo caawin lagu daray waxa uu noqon lahaa fiican in la qaato wax soo saarka dabiiciga ah organic kasoo horjeeddo Pharma weyn. Oo weliba waxaan la hubiyaa galay peptides iyo nootropics maskaxda bio-hack kala duwan ee ceeryaanta maskaxda inaan. Waxaan raalli rarin si aad u hesho wax soo jeestay ahay. Waxaan ahay nin si nabad ah laakiin u baahan tahay caawimo. Thanks to ALL for dhegaysiga iyo FADLAN si xor ah u email ah oo ku saabsan wax fikrado ah ama fikirro. Waxaan haysan lacag si ay u iibsadaan waxyaabo aanan haysan wax laga walwalo in. Mahad Ilaah! My qaliin ahaa 340,000 dollars iyo waxaa oo dhan bixiyay oo waxaan ku faanayaa in ahay. Ilaahay ha idin barakeeyo oo dhan iyo rajaynaynaa in aan ka maqalno qaar idinka mid ah. Si daacad ah, Bart.
hi qof walba – halkan update aan ka seddex isbuuc ka hor. Waxaan xusuustaa Vicodin ugu horeysay… 31 sano jir ah. Weli ka mid ah ugu fiicnaa……
Anigu waxaan ka soo kabsaday booqasho lama filaan ah isbitaalka dhexe ee Brasil Markii qalbigaygu joojiyey daqiiqo badan oo dunida ah ka dambeeya waxaan ka tagay. Waxaan mucjisooyin yimid dib uga dhintay ka dib muddo dheer oo cajiib ah oo ka mid noloshayda safarka iyo meelaha ugu cabsado. tooso, Waxaan u qalmay stroke (aan caadi ahayn), curyaan, oo saddex bilood ayaa soo maray ka hor inta adduunka igu heeraro ahaa mar kale. Waxaan u maleeyay in aan qaadan lahaa morphine inta kale ee noloshayda, boqolaal mgs maalin.
Waxay ahayd saddex todobaad aan bilaabay Kratom (kor ku xusan) oo anigaa samaystay hoos si 60 mg afar maalmood ee la soo dhaafay. Berri waxaa dhamaado, morphine mar dambe! Sidee baan waxan u qorsheeyaan didnt – aan MSContin ahaa in sahayda gaaban oo waxaan ku dul qabtay shixnad aan la isticmaalin ee Kratom in la rogrogay oo khaanad ku dhawaad ​​sanad ka hor kufeen. Waxaase yaab leh, waxaa iga caawiyey sidii aan si tartiib ah xaqiiqsadeen in aan noqon doono ka mid ah morphine yar.
Well, Anigu waxaan u soo ahay. Oo haddii aad la dhibtoonayay inay joojiyaan wax alla wixii opiat aad la qaadato, xataa sulfate saafi morphine at ilaa 1,000 mg maalintii, rajo jirto. Waxaan soo maray on dhibic xagjirka ah si ay hareeraha 60mg toddobaadyo oo aan in ayan dareemin KASTA astaamaha u-barashada. Oo wax xanuun ah ma midkood. Waxaan dareemay in ka khayr badan Waxaan leeyahay tan iyo markii aan ahaa 31 sano jir ah, iyo qof aan la xitaa raadinaya in la soo afjaro qabatinka morphine dose sare, ANIGU WAXAAN AHAY FREE!
Waxaan wixii aan kari bartay Kratom, oo ay ku jiraan cashar weyn in maalin kasta ama laba beddelato dhaawac ka soo cas cagaaran si cad si ay u sii ka baahan qaadasho sare. Kale oo aan ahayn, waa waalan yahay!! Tamaraysan iyo is dajiyaan, xanuun xor ah oo ahanno! KRATOM i siiyey BACK MY LIFE !!
qof kasta Thanks halkan taageero yaabka leh oo dhan. sheekooyin iyo guulahaas ka dhigay this suurto gal ah iyo waxaan idinka oo dhan jecel hadiyadaha aad heshaan oo aad i siisay iyo kuwa kale oo ila mid ah, waxaana rajeynayaa in haddii aad ku jirtid xayndaabka ama xitaa ma uuraysan karaa in aan awoodo si aad u hesho Daanyeerka off of dhabarkaaga, AADI EE IT! Iyo haddii ay jiraan wax aan ku siin karaan, kuu sheegi, maqlina aad ii soo sheeg. Life badiyay oo si lama filaan ah mar kale helay ayaa laba jeer igu dhacay. Iyo sida cajiibka ah in f__ing hasnt FDA wax walba xiri innaga dhammaanteen u bixiyey. Laakiin Waxaan u maleeyay in waxa ugu wanaagsan ee ay ahayd in aan siino fursad!
Nasiib wacan, Ilaahay ha barakeeyo oo si fiican u noqon. — Markus
Baryayaaye, ii sheeg waxa aad qaaday, anigu waxaan ahay on tiro la mid ah oo idinka mid ah Morphine ER sida 400 mg oo rabto in aad hesho off lay isku dayaya laakiin ay igu dilay xanuun badan iyo qaadashada…
cajiib ah , oo aan isku daynay Meng Da, Thai, iyo Green Malay oo ay dhanna way kaa qaadan damacsanaayeen opiat aan ka qaadashada Percosets sanado horumariyo ah. Waxaan u malaynayaa in aan script soo socda dib u fiirinayaan 120 10/325 percs laga yaabo in aan la soo dhaafay . Malay waa ugu baashaal, Da meng siiya tamarta at qiyaasood hoose. alaabtii Tani waa for dhabta ah. Ma sidoo kale la biir at dhan tago sidaa darteed waxaan ku siin laga yaabo in ay kor aad, ma in aan la cabbo a “dhibaato” kaliya biir farsamada in uu yahay mid qaali ah oo waana hubaa dhigeysa miisaankiisu on. Hal todobaad oo biir ah ma lumin lahaa 2-3 pounds fudud, oo waxaan jeclaan lahaa inaan. Kratom waa dhabta ah iyo dibba, runtii shaqeeya.
Hello oo dhan. Waxaan la qaadanaya 3-4 10-325. Vicodin ama Percocet tan iyo markii aan lahaa xanuun ka haya sambabada 15 sano ka hor. Ka hor inta aan anigu taas waan ku soo qaaday Tylenol kaliya oo waqtigan waxaan ku jiray 30 sano jir ah. Waxaan qaatay kiniin fara on tramadol oo aan bartay galay angeldust jeestay in aan nidaamka. The dhakhtar oo aan labada naxay! Waxaan u lahaa qalal iyo waxaa la geeyay isbitaal loogu talagalay 4 maalmood laha dhibaato sii raagta. Wiilkaygiiyow dabcan ka war aan qabatinka iyo kratom laga helay dukaan madaxa deegaanka iyo waxa ay isku dayeen ka dib markii uu bilaabay samaynaya meth. Waxaa si weyn u caawisay. Waxaan si degdeg ah u baxay oo soo gaaray qaar ka mid ah da maeng kaabsoosha. waan qaatay 7 oo wuxuu helay in 4-5 ayaa badan ALL jamasho layga gooyo. habka My fikirkiisu yahay af iyo aanan haysan in daraageeyey soo baxay dareen mar dambe. Waxaa jira noocyo badan oo oo nooc halkaas kastoo. Waxaan isku dayay badan. Oo ah kuwa aan doorto waa ka American Kratom-30gr ama 60caps muddo 30$ ama Ethnos Edens c urur loogu talagalay 40$ waayo, si xun ugu tiro la mid ah. Waxaan isku dayay kaliya maeng da nooca. Aad ayaan ugu faraxsanahay, waxaa ka ahay oo waxaana barakaysan waxaan leeyahay wiil kii hooyo jecel yahay. Halkaan hoose rajo iyo baryayaaye FDA uusan Mareykanka ka qaadan barako this. opiates nuugi oo na sii ugu soo laabtay iyo samaynta quruun ama quruun caalamiga ah ee dadka balwada leh. Waxaan rajeynayaa in aan sheekada ka caawisaa xitaa hal qof oo nolol ku nool sida ay u la micno ahaa inuu noqdo.
Ayaa dr qoray opiates muddo sanado ah ay sabab u tahay xanuun raagay auto daran accident..My Dr fariistay kaliya bishii la soo dhaafay & Ampla Health i baabbi'iyey turkey qabow, sababtoo ah ma dhakhaatiir kale kula macaamilooteen xaaladaha maamulka xanuun joogto ah.. Yaraanayeen hoos uga 60 mg in 15 mg ka badan 2 bilood.. Waxaan saaxiib ii siiyey 2 8 kiniiniyada bufenophine mg oo aan ka qarxay burburi & qaaday in ka badan a 7 xilliga maalintii .. Weli waxa uu leeyahay qaar ka mid ah bixitaanka bartamihii monor-, inta badan lugta nasasho ah, feejignaan xumo hurdo la'aan.. Bilaabidda on Kratom 4 maalmood ka hor & runtii waxay ka caawisaa…Im awoodaan in ay u shaqeeyaan iyada oo aan qoyska caadiga ah ka fiirsaneysa inay hishiis la haraati aan hablt Metadon.. No dhaawac on Metadon, ama xanuun caafimaad Aan maxaa yeelay, way i siiyey quaity painfree of life..But i hadhay meel xun marka dhakhtar aan ka fariistay… MAHADSAN U KRATOM..
hi dhan, Just xoogaa info,waxaa laga yaabaa in baxay caawin doonaa qof. La Hashii on fiican Heroin ee ku saabsan 2 bilood si toos ah, Anigu ma joojin kari waayay. Raadinta qof dhacaan (ma run ahaantii, laakiin si dhab ah ka fikiray, waxa ku saabsan) kale 6 pc, Waxaan is-idhi 'in ay, mar dambe ', Waxaan bilaabay eegaya meelihii daaweynta, kuwaas oo dhan, waxa qiimaha a!! Waxaan kaliya wax ka qaban…Haa sax, Waxaan ka jiran, ay gabi ahaanba dhalanteed, Waxaan hadda ka arki kartaa sida qof naftiisa ku dili lahaa ka badan ku xanuunsan in, quruxsan murugo in la yidhaahdo. Sida aan tukanayay mana dhimanayo (haa, waa xun) Waxaan xusuustaa maqaal aan ku saabsan Kratom akhriyo ka sano ka hor. In Hawaii waxaad tagi kartaa dukaan kasta oo madaxa iyo qaadato qaado, halkan CA Waxaan u suurtagashay in la helo mid ka mid ah hal 'Captain Amsterdam’ Premium Vietnamese, ayaa 15grams of kaabsoosha gelatin kuwaas, qaaday 15 kaabsoosha oo waxaan dareemayaa ka badan ama ka yar sida caadiga ah, ma weyn, laakiin ma xun. Waxaan u badan tahay qaaday aad u badan laakiin waxa aanu si weyn CAAWIN!!! Waxaan u lahaa in soo degi oo waxaad ku qortaa oo ku saabsan sababta oo ah saacado ka hor laba, Anigu ma joojin kari lahaa heaving ama ka degaysid sariirta, hadda waxaan dareemayaa ok, ugu yaraan ku filan si ay sudhan yihiin nolosha. Anigu ma ihi sare ama wax, laakiin soo bixid ah ayaa la joojiyay ama 'khiyaaneeyey.’ Waxaan rajaynayaa in this caawin doonaa qof waqti sababtoo ah jahannamada. Waxaan dhammaan opiates ka Oxy in Norco in Fentanyl in dillies, hadda H, waxa Kratom Ololaha Nolol yahay…
Waxaan ahay on herion oo ay ku for 2 sano ah 11 sano ka hor this waxaan dabamariyay kiniinka, marna loogu talo galay in ay ku raaxaystaan ​​ama noqon xiran , Waxaan isku dayay in uu joojiyo on aniga ii gaar ah, Waxaan ahay ogyahay khataraha aan hadda qaato xaddi in meesha aan ka soo madow iyo markaan imaado aan si wax fikrad ah halkaas oo aan ahay ama sida aan halkaas ka helay. Soo bixid yihiin cabsi aan maalinta 3-Waxaan u lahaa si aad u hesho H si JOOJI shuban si joogto ah isku dayeen iyo matag si fiican ka dib markii maalintii 1 waxaa hadda heaving qalalan , baraf laakiin armuu dhididka ka dareenka gubashada ah , gariir xoog ka xanuun ee aan gacmaha iyo lugaha , lugaha aan yeelin si xun ayaan macno ahaan oo kaliya ku qayliyey, dareen todobaadka iyo xanuun daal iyo cudur ayaa sababay hurdo la'aan, waayen dareenka niyad-, cabsi, cidlo, dareen rajo la'aan iyo wax aan waxtar lahayn iyo xishoon , H ma aha maandooriye waxa uu Ibliiska iyagoo H aan ku nool waxa uu ku timi iyada oo loo marayo nolosha kabuubyo in waxa ka socda kugu xeeran, aad dhahnaa ma tamarta ama niyad sare waa mid cajiib ah oo ku saabsan H aad dareento wax xanuun ah ma laakiin on H waxba idiin dareemaan, marka aad go'aan aad rabto in aad iska herion (Ibliiska aka ) ma doonayo in laydin sii daayo. Waxa aad jiididda dhex Jahannamo maalmood oo maalmo sugayaan in aad kor u siin iyo samayn Herion more. Waxaan isku dayay in ay maalin 3 I ma uu samayn karin . Haa waxaan u arki kartaa sida ay dadka halkaas naftiisa qaadan doonaa ka badan heshiis la tish, iyo qaar ka mid ah dadka u dhinta baxeen awood . Rugaha kaa caawin karaa laakiin waa 300 si ay u 500 a booqasho iyo talo si aad u hesho fasallada aad ku xidhan daroogada dowladda.
waxa cadaadis aad ku baryayaaye, ii sheeg waa ugu fiican iyo waxa qiyaasta. Waxaan caawiyo ka bixitaanka u baahan tahay, niyadda / habdhaqanka, tamarta / dhiirogelin, . . out aad iga caawin kara yar talo ah ,
Taasi waa arrin guul ah
Waxaan la qaadanaya 4-5 50 mg tramadol maalin maalin kasta. Helitaanka off tramadol waa naxdin leh!! Aan ka fariisan turkey qabow iyo bilaabay qaadashada Kratom sida ugu dhakhsaha badan astaamaha u-barashada waxaa lagu dareemay. Ka taxadir in aadan u baahan tahay inaad qaadato badan oo Kratom gargaarka. Haddii aad wax badan qaato waxaad ka heli doontaa dhab ahaantii Fight. Miyaan ka yeelan wax ku saabsan 5 600 saftay mg gel ee Bali Kratom dhawr jeer maalintii iyo gebi ahaanba ka caawisaa niyad-jabka, kulul dhidid qabow iyo lugaha wrestless.. Waxaan ficil ahaan dareemaan caadiga ah..
Kratom xaqiiqo ah uu uga takhalusi astaamaha u-barashada opiat – isku dayay & run. waan ogahay. Kratom xitaa ku darayaa a dareen opiat yar '’ ee u gaarka ah, kaliya xoogaa yar. Laakiin aan waayo-aragnimo ahaa: inta lagu guda jiro kratom bixitaanka firfircoon lahaa in la dib-u-duraa si joogto ah, sida saacad kasta ama laba. Sidaas badan gacanta, sida 4 oz. qiimihiisu, oo waxaad heli doontaa iyada oo la raaxo lahayn.
su'aasha, taas oo dhaawac u fiican yahay bixitaanka Herion? Oo intii aan ahay ee Maraykanka, ay Super adag tahay inay helaan meel ay u soo iibsadaan marka laga reebo online, garanaysid goobaha wanaagsan si aad u dalbato ka iyo sidoo kale??
Waxaan popper xanuun pill for a 11 sano ka badan la soo dhaafay ka 2 sano dowladda ka dhakhaatiir joogto ah rugaha xanuun qaadashada qoro waxaan noqday addict herion a. Marnaba ma aanan dooneynin in ay qaataan dawooyinka aan dhif khamriga cabbo. Waxaan ahaa on tabs dhibaatooyinka iyo dib iyada oo sababtu tahay waxaan noqday addict ah. Waxaan doonayaa in aan nolosheyda waxaan rabaa in aan noloshayda ku nool , qof fadlan ii sheegi kartaa waxa starin of kratom waa ugu fiican iyo waxa site online waxaa fiican inaad iga iibsatid . Waxaan isku dayay in ay joojiyaan mar on aniga ii gaar ah , kor tuuro iyo aadidda musqusha waqti isku mid ah halka baraf iyo hooraya dhididka ka si kulul, jidhkaygii gariir ka si daciif ah , lugta ladagaalayaan si xun la ii macno qaylinaya , maroojis in aan gacmaha iyo calaacalaha , afka oo qalala, laakiin wax kasta waxaan isku dayay inaan ka cabbo dib u kacay ama ka , heaving qalalan maalmo si ay meesha u yeelin si xun la ii qeyliyo , ma seexan karo, ama xataa weli fadhiisan , degeen baxay musqusha, baddelan , murugo leh, cabsi, dareen rajo la'aan iyo keligiis, xishoon, ma tamar ama rabitaan uu samayn wax aan ogahay oo dhan waxaan doonayaa in aan waxa oo dhan si JOOJI ! Waxay ku yidhaahdeen toddobaad ka dib markii, aad leedahay herion whooped , Waxaan ka buka iyo in maalinta xanuun badan 3 ilaa aan siiyey oo wuxuu sameeyey wax yar bararto a , in bararto yar wax badan ayaan kaliya bilaabay isticmaalaya mar kale i caawisay. Waxaan ka argagaxay ee soo bixid ee herion. Fadlan qof ii sheegi kartaa waxa dhaawac ugu wanaagsan iyo meesha ugu fiican online si aad u iibsato. Farxin iyo mahad gargaar ah .
~ Badan murtida Meg
Its ahayd 4 bilood tan iyo markii aad posted su'aalahaaga ku saabsan Kratom, sidaa darteed waxaan rajeynayaa in aad hore u samaystay aad H soo bixid, laakiin ay dhacdo in aad weli ku dhibtooneysa, Waxaan doonayaa in aan ka caawin jawaabaan su'aalahaaga. Halkee si ay u iibsadaan Kratom? Well Waxaan ahay cusub in this site iyo waxaan aqoon u leh sharciyada ku saabsan ma ihi waxa aan iyo ma hadli kartaa karaa si aan ma doonayo inaan aad u gaarka ah. LAAKIIN, haddii aad search degdeg ah on youtube waxaad ka heli doontaa dhowr videos halkaas oo ay dadku sameynayaan talooyin wanaagsan, on meesha laga gato iyo sharaxaada oo ka mid ah nooc oo kala duwan. Iyo talooyin guud oo wanaagsan oo ku saabsan sida si ay u doortaan iibiya a. Sharaxaada of nooc aad looga heli karaa online. Ilaa hadda sida kaas oo noqon lahaa ugu wanaagsan ee aad ka laabato, Waxaan si daacad ah u malaynayaa in inta aad leedahay qaar ka mid ah wax soo saarka oo tayo fiican leh (oo barwaaqadii oo ka mid ah), aad u yeelan doontaa in qaab wanaagsan. The nooc cas waa la filayo roon suuxin, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad bilowdo waxaa, tan iyo inta badan dadka ku WD seexan kartaa maalmood / todobaad on dhamaadka. The nooc cad ayaa la rejeynayaa in ay tamar dheeraad ah si shakhsi ahaan ma aan tegi lahaa wadada in haddii aad wax si aad u hesho soo gabagabeeyay. My waayo-aragnimo shakhsi ah ayaa in ku filan (aad u badan) cadaadis kasta oo i dili doonin seexan (iyo sida insomniac a chronic la leh wax). Waxaan rajaynayaa in aad hore u wada sameeyey oo ay qabanayaan ka fiican hadda. Haddii aadan, heer sare ah waxaan kugu dhiirinaynaa in aad isku dayi kratom ah, waxa uu si weyn i caawisay. Ilaah ha barakeeyo.
Hel on barnaamij subutech a. biiro waa adag tahay in aad noqon doontaa xun maalmo lamaane waxaa laga yaabaa in toddobaadkii. kaliya maalin aan laga yaabaa. i Anigu shakhsi ahaan waxa uu ahaa shan maalmood. Waxaan laakiin marka ay hesho a aad dareento caadi ah oo ay ku jiraan si sahlan inuu yimaado off si degdeg ah. Waxa aan joojiyay on kiniin 4ml ka dib markii ka soo degaysa, 8. Waxaan la caddeymaha ay u tagaan jidka oo dhan si ay u 0.5 Waxaan qabaa laakiin ma aanan dareemi tahay a shakhsi…. Laakiin in ii ahaa…. Rajaynaynaa in aad la mid yihiin
Waxaad hi….Waxaan ahay in sboes aad. Sidaas ma dareemaan xun. Waxaan u ahaan jirtay 6 OC80s maalin…ka dibna la ii soo jaray si 16mgs buluug. Waxaan ahay ugu gataan, hadda aan waxba haysan…caawimo kratom doonaa? Waxaan rajaynayaa in si
Fadlan caawin i isku dayeen isku qasin kratom wax walba ma suurtowdo in liqi. Waxaan akhriyey sida dadka oo dhan kuwanu waxay leeyihiin in ay wax weyn ka shaqeeya. Sidee dadkan u cunin ama u cabo. kratom oo dhan ma isku mid eegto. Waxaan soo iibsaday Bali, kaliya da da Indo keliya n cas Sumantra. Waxaan oo dhan furay 4 bacaha n waxaa isku mid ah u egtahay.
Ma u baahan tahay caawimaad bixitaanka waa kratom la qaaday ka hor inta qof galaa bixitaanka? Waxaan isku dayay cabo da maeng laakiin dareemay ma kala duwan. Inta badan ulaha kratom in dhinacyada koobka wax kasta oo i daraan la uusan ficaan la cabniinka.
Waxaan ahay 30 mg methadone.Been waxa on muddo ka badan 5 ugu dambeyntii yrs.Im isku dayayaan si aad u hesho off.Whick noqon lahaa kratom ugu fiican ee Metadon baxaan iyo qiyaasta.
dose My subax maalin walba waa 3-4 qaado, Waan ka xumahay lahaa typo a kor ku xusan, ma qaado lol. Oo waxaan sida caadiga ah qiyaasta 2-4 jeer maalintii ku xiran tahay sida aan dareemayo.
Hello qof walba., waxaan aad u, ayaa la dhibtoonayay xanuun pill Siriyalka muddo sanado ah ay sabab u tahay qalliin badan. Waxaan sidoo kale ka heli naftayda oo raba in ay isku dayaan Kratom. Wax kasta oo aan wax ku saabsan ka akhriso waa rajo. Waxaan rajeynayaa iyo tukado, in ay si dhab ah nafiso xanuunka iyo caawiyo guurka ka nin ka dhigay kiimikada si dabiici ah. Waxaan la xidhiidhi karaa oo dhan waxaan aad u badan ay dhibaatadu ka soo jiid oo ka imanaya akhri, waxaa jira si dhab ah wax ka sii xumi. Ilaah oo dhan ammaan, oo rajeynaya nasiibka cusub.